Aprily 2020 | RayHaber | raillynews
Volana: Aprily 2020
Fankasitrahana ny fahazoan-dàlana fohy nataon'i Karsan
Nekena ny fangatahana fotoana fohy ny fotoana i Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Tao anatin'ilay fanambarana natao tamin'ny Platform ho an'ny Public Public Exclosure Platform (PDP) dia nisy ireto fampahalalana manaraka ireto: [More ...]
Hitohy hatrany amin'ny fandehanana amin'ny ala ny làlambe IETT
Araka ny fanapahankevitra noraisina tao anatin'ny ambaratonga hiadiana amin'ny coronavirus, ny curfew dia ampiharina amin'ny zoma, asabotsy sy alahady. Drafitra fanitarana IETT ho an'ireo matihanina ara-pahasalamana, mpiambina ny fiarovana ary mpiasa hafa izay tsy maintsy mandeha miasa [More ...]
Mifanaraka amin'ny fanapahan-kevitry ny Birao Misahana ny Fahadiovan'ny governora ao Ankara, tamin'ny daty 19 ary niisa 01/03, tamin'ny daty 2020-29.04.2020 Mey 2020, izay ampiharina amin'ny fehin-dalàna ny fehin-kevitra tokony horaisina amin'ny valan'aretina coronavirus (Covid-27). [More ...]
Fiaran-dalamby no azon'ny fiaran-dalamby tao amin'ny haavo fiampitana tao Polonina 14 naratra
Olona 2, roa tamin'izy ireo no naratra mafy vokatry ny fiaran-dalamby nitatitra kamio amina hazakazaka miampita akaikin'ny tanàna Poznan ao andrefan'ny Polonina. Raha ny vaovao azo, ny loza omaly alina teo amin'ny haavo miampita any amin'ny tanànan'i Bolechowo, ao akaikin'ny tanàna Poznan ao andrefan'ny Polonina. [More ...]
Asa vita amin'ny asa ho an'ny biraon'ny Bus vaovao ao Ordu
Ordu Metropolitan Municipality Karşıyaka Manao asa tazo amin'ny lalana 2,5 km fantatra amin'ny gara vaovao sy toby Eskipazar TOKI any Mahallesi Çiftlik Caddesi. Miaraka amin'ny asa izay tokony hatao Karşıyaka Tetezana fiarovan-tena manodidina [More ...]
Nanatrika ny fihaonana an-tampon'ny fiara ny filoha Sekmen
Ny ben'ny tanànan'i Erzurum Metropolitan, Mehmet Sekmen dia nihaona tamin'ny minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa Adil Karaismailoğlu tamin'ny alàlan'ny rafitry ny fihaonambe video. AK antoko Erzurum solombavambahoaka Prof. Dr. Recep Akdağ, Selami Altınok, [More ...]
Ny Repoblikan'i Torkia State lalamby (TCDD) tamin'ny 2019 tamin'ny alalan'ny fotoana Aprily, olona 356 izay anjara-fanompoana Teo vahoaka dingana fandraisana mpiasa miasa ny mpiasa no nanomboka. Manodidina ny arivo ny olona iharan-doza noho ny vokatra tsy mbola noparitaka nandritra ny herintaona [More ...]
Ny sarisain'ireo môtô amin'ny olona namboarin'ny TCDD Afyonkarahisar faha-7 amin'ny Dirte régionale faha-XNUMX mba hahafahana manome ny toerana ilaina sy ny fitsaharana ny serivisy fitantanana ny lalamby, ny lalana sy ny milina fananganana any amin'ny toeram-piasana. TCDD [More ...]
Ny kaominina Antalya Metropolitan dia nikasa ny hanome fitateram-bahoaka ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana, ny mpiasa ho an'ny daholobe ary ny mpiasa hafa, izay voatery miasa ao anatin'ny faritry ny curfew 30 andro, izay hanomboka ny alin'ny 3 aprily. 3 andro [More ...]
Ao anatin'ny faritry ny Tetikasa Antalya Metropolitan Faha-3 amin'ny rafitry ny rafitry ny rafitry ny rafitry ny arintany, dia misy ao amin'ny sampanan-javaboahary ao amin'ny lalan-kizika ao amin'ny vavahadin'ny intersection (Coast Guard Junction) ao Dumlupınar sy Adnan Selekler Caddesi (Coast Guard Junction) mandritra ny 01 andro manomboka amin'ny 2020 May 15. [More ...]
Halkalı Ny fanamboarana lalamby Kapıkule dia manohitra ny tantsaha avy any Edirne!
Republic of Madagascar Minisitry ny Fitaterana sy ny fotodrafitrasa natao ao amin'ny Vondrona Eoropeana ny fiaraha-miasa amin'ny Istanbul Halkalı-Ny fananganana ny tetikasa Edirne Kapıkule Railway Line dia nanintona fihetseham-po noho ny fitomboan'ny haben'ny vovoka any amin'ny faritra fambolena. Ampifandraisina amin'ny distrikan'i Havsa ao Edirne [More ...]
Fiaraha-miasa miaraka amin'ny ASELSAN ho an'ny fanamafisam-pitaterana fiaran-dalamby avy ao amin'ny University University Istanbul
in Istanbul Varotra University sy ASELSAN mba hampihenana fiankinan-doha amin'ny any ivelany lalamby sehatry ao Torkia, an-trano R & D asa mba hampiseho vahaolana ho an'ny famonoana ny fiaraha-miasa dia nanao sonia fifanarahana. Tao anatin'ny rafitry ny protocol, ny lalamby an-trano [More ...]
Covidien-19 vokatry ny Torkia ny fiarovana sy ny Aerospace Industry
Ny sehatry ny fiarovana sy fiaramanidina fiaramanidina dia nahazo ny anjarany ihany koa amin'ny fahasimbana ateraky ny tsimokaretina Corona, izay miparitaka manerana ny tany, manomboka any Shina. Famokarana, famatsiana, fifanarahana ary fifanarahana vokatry ny virus izay nahafaty olona an'arivony [More ...]
Nilaza ny minisitry ny fitaterana ny hampiato ny fivarotana tapakila fitateram-bahoaka amin'ny vidiny lafo be
Ny minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa Adil Karaismailoglu dia nilaza tamin'ny fanambarana fa ny orinasa dia tokony hampihena ny isan'ny fitsangatsanganana amin'ny fitaterana mpandeha an-dalambe ao anatin'ny làlan'ireo fepetra noraisina manoloana ny fipoahan'ny coronavirus (Kovid-19). Mampifandray ny fitsangatsanganana amin'ny fialana [More ...]
Famakiana boky fialan-tsasatra amin'ny kilasy faha-2
Boky kilasy 2 kilasy dia andiany iray mikendry ny hamerina ny lesona sy ny lohahevitra nianarana ny mpianatra kilasy faharoa tamin'ny taom-pianarana ary hanamafisana ny fampahalalana eo. Ara-dalàna ny fialan-tsasatra amin'ny kilasy faha-2 [More ...]
Fanafody fanampiana avy any Torkia ho any Afrika Atsimo
Medical Health fanampian'ny Torkia ho any Afrika Atsimo; Ao anatin'ny ady amin'ny COVID-19, ny A400M an'ny Tafika Tiorka nitondra fitaovam-pitsaboana ho an'ny Repoblika Afrika Atsimo dia namita ny fiomanana nataony tao amin'ny seranam-piaramanidina Kayseri Erkilet. [More ...]
Mitohy any Konya ny fanampiana ny fitaterana ireo matihanina amin'ny fahasalamana
Konya Metropolitan munisipaly dia nanome ny fitaterana ireo mpiasan'ny fahasalamana ao Konya amin'ny fitateram-bahoaka hatramin'ny andro voalohany fangatahana fandroahana. Ao anatin'ny famerana ny fomba 3 andro, ny metropolitan dia hijanona ao amin'ny hopitaly sy ny hopitaly koa. [More ...]
Metrobus, Bus, Ferry ary Metro miasa any Istanbul ao anatin'ny faritry ny fandrarana ve?
Ho ampahany amin'ny fepetra noraisina noho ny valan'aretina Covid-19, ny curfews dia hampiharina amin'ny tanàna metropolitan 1 sy Zonguldak amin'ny 2 May 3-30-XNUMX. Raha nijanona tao an-tranon'izy ireo nandritra ny telo andro ireo mponina tao Istanbul, dia maro ny vondrona sy mpiara-miasa ao amin'ny İBB [More ...]
Karşıyaka ary ny Bostanlı Ferry Docks
Izmir Metropolitan kaominina taorian'ny onjam-by metro hanamora ny fidirana malalaka amin'ny olom-pirenena amin'ny saron-tava fitsaboana Karşıyaka ary ny seranan-tsambo Bostanlı dia namboarina koa. Fampiharana Maskematic KarşıyakaNoraisin'ireo mponina. Izmir Metropolitan kaominina [More ...]
Round 2 mahazo haavo avy any Etazonia avy any Torkia Sincan fanafody Aircraft Carrier
Ny OTAN mpiara-ny United States teo fangatahana, mba hanohanana ny ady amin'ny Etazonia mba hanomezana fanafody any Torkia Coronavirus. Torkia Covidien-19 Nanampy tanteraka ny firenena nandritra ny 55 areti-mifindra sy izao tontolo izao ny maha-olona lehibe indrindra faha-3 [More ...]
1500 Voavidy tao amin'ny vavahady Sarp Customs ny Mpanjakavavy Live
Kamiao 1500, gony sy zava-mahadomelina 1 litatra no tratra tao anaty kamiao iray izay hita fa mampiahiahy ny fandidiana natao tao amin'ny vavahadin'ny Sarp Customs Custom an'ny ekipan'ny minisiteran'ny varotra. Hantsana mba hiditra an'i Torkia [More ...]
Fanohanana ara-tsaina momba ny olom-pirenena amin'ny telefaona noho ny COVID-19
Ny minisiteran'ny fianakaviana, ny asa ary ny asa fanompoana ara-tsosialy dia manome serivisy fanohanana ara-tsaina mandritra ny 65 taona, olona manana kilema, maritiora ary vazaha, ary ireo izay any amina karama, izay mangataka sy mila. finday, [More ...]
Saab dia manolotra ny fiaramanidina voalohany GlobalEye AEW & C fiaramanidina fiaramanidina amin'ny Emirà Arabo Mitambatra
Saab dia nanambara tamin'ny 29 aprily 2020 fa nanome ny fiaramanidina GlobalEye AEW & C voalohany ho an'ny Emira Arabo Mitambatra izy. Ny Emirà Arabo Mitambatra dia manana baiko telo an'ny GlobalEye AEW & C nahomby. United arab [More ...]
Araka ny 'kalandrie fampandanjalanjana »nolazaina tamin'ny fivoriana kabinetra izay tarihan'ny filoha Erdoğan; Aorian'ny fety dia tsy hitranga ny "normalization zato isan-jato" fa hisondrotra tsikelikely ny fandrarana ary hisokatra ny faritra mihidy. Torkia, hita voalohany tamin'ny Martsa 11 [More ...]
Ny fitambaran'ny Coronavirus dia misy sombin-tsolika mihanaka ny fandotoana rivotra
Ny fikarohana nataon'ny mpahay siansa momba ny areti-mifindra amin'ny coronavirus, izay misy fiantraikany manerana an'izao tontolo izao, dia ahafahantsika mahafantatra an'io aretina io ary mandray andraikitra. Tsy nahitana ny oniversite Harvard fa ny fahalotoan'ny rivotra dia niteraka fahafatesan'ny coronavirus, University of Bologna [More ...]